यौनकाण्डमा मुछिएको महरामाथिको विश्वास फेरि फर्किएला ?
२०७६ अश्विन १६, विहिबार
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पार्टी (नेकपा)का नेता तथा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एकाएक बज्रपात आइलाग्यो । बज्रपात सामान्य थिएन । गम्भीर प्रकारको अपराध मानिने बलात्कार जस्तो जघन्य आरोपको सामना गर्नुपर्यो जसका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिए ।
विश्वासको घेराभित्र रहेर काम गरेका महरा र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध अब कस्तो रहला ? महरालाई लागेको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि होला ? प्रचण्डले फेरि पनि महरालाई विश्वास गर्ने वातावरण आउला ? यी यस्तै विभिन्न कुराहरु महराका शुभचिन्तक र प्रचण्ड स्वंयलाई अनुभुति हुने कुराहरु हुन् । जनयुद्धले गाँसेको सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै विश्राम लाग्ला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
महराले दिएको राजीनामाले नेकपामा मात्रै नभएर सम्पूर्ण मिडिया जगतदेखि राजनीतिक दलसम्म तरङ्ग पैदा भयो । अझ नेकाप भित्र त केहि उच्च तहका नेताहरुले महराको राजीनामा सांसदबाट समेत आउनु पर्ने तर्क दिन भ्याए । नेकपाकै दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले नेकपाले महरालाई नचिन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिए । जसमा उनको राजीनामापछि सभामुख पद् मात्रै नभएर उनको सांसद पद समेत गुमेको र पार्टीले उनलाई सांसदको रुपमा समेत नचिन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । तर, नेकपाका शिर्ष तहका नेताहरुले केहि शिर्ष तहका नेताहरुले भने महराले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसकेपछि अन्य कुरा गाैण रहेको तर्क अगाडी सारे । जसकारण महराले सभामुखबाट मात्रै राजीनामा दिए ।
याैन दुराचारको आरोप लागेपछि महरा माैन रहे । महरा प्रायःजस्तो विवादमा आउँदा माैन बस्ने गर्छन् । यो उनको पुरानै बानी हो । प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिने महरा पूर्वमाओवादी खेमाबाट लाभको पद लिने नेताहरुको अग्रपंक्तिमा आइपुग्छन् । प्रचण्डले किन महरालाई सधै सत्ताको साक्षी बनाउछन यो भने प्रचण्डले आजसम्म खुलाएका छैनन् । यद्यपी प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने एक नेताका अनुसार महरा पार्टीप्रति जिम्मेवार र शालिन नेताको रुपमा चिनिन्छन् । अझ उनी पूर्वमाओवादी खेमामा महरा सरको उपमाले परिचित छन् ।
तीनै महरा सर एकाएक कसरी भए भिलेन ? यो एक अनुत्तरीत प्रश्न हो । यद्यपी महरालाई लागेका आरोपहरु आजसम्म स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सकेका छैनन् । बलात्कार प्रकरणमा महराको नाम जोडिएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी छरपस्ट रुपमा बाहिर आएका छन् ।
कतिपयले महराले सत्ताको दुरुपयोग गरेर पीडित भनिएकी रोशनी शाहीलाई प्रभावमा पारेको समेत जनाउन थालेका छन् । तर, शाहीले एकाएक आफ्नो बयान फेरेर महरा आफ्नो बाउ समानको मान्छे भएको भन्दै बलात्कार प्रकरणबारे समाचचार ब्रेक गर्ने हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीलाई रअको एजेन्ट भन्न समेत भ्याएकी छन् । आफ्नो श्रीमान र आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि बाध्य भएर आफूले महराको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै रोशनिले भन्न थालेकी छन् । चित्रजंग शाही (रोशनीका श्रीमान)ले महराको बारेमा बाहिर आएका कुराहरुमा सत्यता नभएको भन्दै यसबारे धेरैले उचाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपी आज रोशनी र चित्रजंगले भने २८ वर्षे वैवाहिक सम्बन्धलाई ब्रेक लगाउने निर्णय गरेका छन् । दुबैले हस्ताक्षर गरेको सानो चिटमा आफूहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको जानकारी गराइसकेका छन् । भने, रोशनीले प्रहरीमा गएर महराबाट कुनै किसिमको दुर्व्यवहार नभएको भन्दै निवेदन समेत दिइसकेकी छन् ।
दुई पटक भिडियो अन्तरवार्ता दिएकी रोशनीले पहिलो पल्ट बलात्कार गरे भनेर महरालाई आरोप लगाएकी थिइन भने, दोश्रो पटक बाउ समानको मान्छेको दर्जा दिएकी छन् । रोशनीले लगातार आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा विभिन्न पोस्टहरु लेख्दै महराले केहि गल्ती नगरेको र किटानी जाहेरी नदिएसम्म प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्छ भनेर प्रश्न समेत उठाएकी छन् । आफू डिप्रेशनको सिकार भएको भन्दै नियमित आैषधी सेवन गर्दै आएको र केहि दिनदेखि आैषधी सेवन नगरेकाले यस्तो हुन गएको टिप्पणी समेत छ । यसमा विभिन्न कानुनी बाटाहरु छन्। जसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष हनुसन्धान छानविन गरेर अदालतले निर्णय गर्ला । तर, दुबै भिडियो बयानलाई हेर्ने हो भने कैफियत भने देखिन्छ नै । रोशनीलाई बाध्यतामा पारियो की भन्ने आधार भने शून्य भएको मान्न सकिदैन् । उनका श्रीमानले समेत महराबाट यस्तो काम हुनै नसक्ने भन्दै याैन दुराचारबारे बोल्नै नचाहेको जनाउदै आएका छन् ।
महरा तत्कालीन माओवादीबाट उदाएका एक खम्बा हुन् । प्रचण्डलाई मोहन बैद्य 'किरण' देखि डा. बाबुराम भट्टराई, विप्लवहरुले छाडेर जाँदासम्म साथ दिइरहने नेता महरा प्रचण्डको वरिपरि नै घुमे र रहे । पार्टी विभाजनपछि बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको अन्तरसंघर्षको बेला समेत महराले प्रचण्डलाई खुलेरै समर्थन सहयोग गरे । अर्का दिवंगत नेता पोष्ट बहादुर बोगटी 'दिवाकर' र महरा प्रचण्डका नजिकका नेता मानिन्थ्ये । उनीहरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रचण्डलाई साथ दिने अप्ठेरो पर्ने स्थानमा समस्या समाधानका निम्ति तयार हुने नेताहरुमा पर्छन् । प्रचण्डले बोगटी स्मृति दिवसमा समेत उनलाई पार्टीले अप्ठेरो परेको स्थानमा खटाउने गरेको जनाइसकेका छन् ।
सभामुख पद रिक्त भइसंगै सभामुख पदका लागि नयाँ निर्वाचनका कुराहरु समेत बाहिर आउन थालिसकेका छन् । पूर्वमाओवादीको कोटामा परेको सभामुख पद फुस्किएको भन्दै पूर्वसभामुख नेम्वाङले समेत चासो देखाएको भन्ने कुराहरु आउन थालेका छन् । तर, माओवादीको कोटामा परेको सभामुख पदका लागि नेकपाबाट देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल र लेखराज भट्टको चर्चा हुन थालेको छ । तर, अड्चन भने कायमै छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको धारा ९१ (२)मा एउटै दलबाट सभामुख उपसभामुख हुन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । यसकारण नेकपामा सकस देखा परेको हो । उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखको प्रमुख दावेदारको रुपमा आएकी छन् ।
महराको राजनीतिक उचाईमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ । महराको जीवनकालमा विवाद र चर्चा सामान्य जस्तै थिए । तर, यो पटकको विवाद भने असामान्य नै देखिन्छ । हाइ प्रोफाइल व्यक्ति याैन दुराचार प्रकरणमा मुछिएको सायद यो नै पहिलो घटना हो नेपाली राजनीतिमा । यसर्थ महरा संकटको घेरामा मात्रै छैनन् । उनी ठूलो अग्नी परिक्षाको घडिमा छन् । जसले उनलाई कता तिर लैजान्छ भनेर यसै भन्न सकिन्न ।
चार दशक कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जीवन समर्पित गरेका महरा २०४८ सालमा नेकपा (मसाल)को जिल्ला सेक्रेटरी भएलगत्तै सोही वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जतिबेला उनि मात्रै ३२ वर्षका थिए । उनको राजनीतिक जीवन वेगमा चल्न थाल्यो । २०५० सालमा उनी संयुक्त जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता बन्न सफल भए । जनमोर्चाको विभाजनपछि तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको थालनी गर्यो त्यो बेला महरा केन्द्रिय सदस्य पनि थिएनन् ।
कुटिल चाल चल्न सक्ने नेता महराले माोवादीको केन्द्रिय सदस्यमा २०५३ सालमा प्रवेश पाए । तर, उनीभन्दा पहिले हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका प्रसाद यादव लगायतका नेताहरु केन्द्रिय समितिमा थिए । सापकोटा र रायमाझी सदस्य रहेको नेताहरुको नेतृत्व गर्दै उनी सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोलीको संयोजक बनेर आए ।
जनयुद्धमा निरन्तर लागेका महरा एकपछि अर्को छलाङ मार्दै माओवादीमा प्रभाव मात्र जनाउन सफल भएनन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास समेत जित्न सफल रहे । पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका उनलाई हेटौडा महाधिवेशनमा महासचिवको रुपमा अर्थ्याइएको समेत पूर्वमाओवादीका नेताहरुले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन् । यसरी उकालो लाग्दै गरेको महराको राजनीतिक कद याैन दुराचारको आरोपले भने सर्लक्कै झारिदियो ।
पछिल्लो समय विकशित घटनाक्रमले महराको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्दै आएको छ । पीडित भनिएकी महिला रोशनीले महरामाथि लगाएका आरोपहरु आफु डिप्रेसनको सिकार हुनु नै मुख्य कारण रहेको उनले जनाउदै आएकी छन् । योजनाबद्ध ढंगले आफूलाई केहि मान्छेले प्रयोग गरेर महराका विरुद्ध बोल्न लगाएको भन्दै उनले आत्मग्लानी समेत गर्न थालेकी छन् ।
टेप प्रकरणमा पार्टीको आन्तरिक सर्कुलरमा रहेर महराले डिल गरेको भन्ने कुरा गाईँगुइ सुनिएपनि महरा आफुले यसबारे आजसम्म जवाफ दिने कोसिस गरेका छैनन् । उनी यो विषयबाट टाढै रहन्छन् । तर, यी यस्ता विभिन्न आरोपले नगलेका महरालाई याैन दुराचारको आरोपले भने बर्लिनको पर्खाल ढले झैं गर्ल्यामगुर्लुम ढालिदिएको छ ।
शेर्पा युवाहरूको राजनीतिमा भविष्य कता ?
शेर्पा गुम्बामा आङ रिता शेर्पालाई राष्ट्रिय सम्मान दिइने
नामुद घुसखोरीहरु कम्युनिष्ट भएका छन्ः उपेन्द्र यादव
भूमि आयोगको विज्ञ सदस्यमा शेर्पा नियूक्त
रुचाइए ‘वनका आत्माहरु र फुच्चे तिब्बती गोठालो’ पुस्तक